Ma Laga Yaabaa Fadeexaddii Ugu Waynayd Ee Abid Soo Marta Somaliland In Ay Noqoto Heshiiska Lala Galay Shirkaddan?
Thursday 15th October 2020 08:41:46 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Marka laga eego dhinacyada sharciyadda heshiiska mugdiga iyo madmadowga ah ee lala galay,
saamaynta shirkadaha waddaniga ah, Iyo ta ugu daran oo ah dacwadaha kaga socda Shirkaddan dalal badan oo dunida ah iyo taariikhdeeda madow ee shaqada qashinka nukeliyarka ee dalalka horumaray sharkado ka mid ah ay qandaraasyada ku siiyeen in ay meelo kale oo ka baxsan dalalkooda ay ku aasto?
Sida fudud ee Wasiirka Ganacsigu uu isaga saxeexay ama la yidhi isaga saxiix iyo khilaafkii gudaha kulmiye gaar ahaan soo dedejinta bedelaadda Gudoomiye xigeenka 4aad wax xidhiidh ahi ma ka dhexeeyaa? Shirkaddu waxa la xaqiijiyay in sanad keliya lacagta ay laaluushka u bixisay ay gaadhayso 3, 000,000,000 ( sadex kun oo milyan ama 3bilyan) Somaliland lafteeda in kastoo aan la xaqiijin hadana wax aan badnayn ayaa la sheeg sheegayaa?
Waxa loo baahan yahay oo waajib ku ah in xukuumaddu ay wax badan ka iftiimiso madmadowga ku jira heshiiska lala galay shirkaddan iyo danta ugu jirta Somaliland oo aan ahayn iska dheh ee run ah oo la taaban karo. Baarlamanka Somaliland ma laaluushka la sheegayo ayay wax ka soo gaadheen maxay wax uga sheegi waayeen heshiiska shirkaddan? Maye xisbiyadii mucaaridka sheeganayay?
Maye ganacsatadii shidaalka ee waddaniga ahaa? Waa maxay bustahan qoyan ee lagu deday? Wax baa si ah oo wax wayn baa si ah.? Tan dadkeediina gaajo ha ugu dhex macaluulaan qoysasna milyan dheero malaydheero waxoodii ha ku noqdaan wax la qaadan karo maaha. Dalka miyaan la wada lahayn? Miyaan loo soo wada halgamin (Kii hore iyo kan dambeba)?
Waa kee ka isagu keligii u soo halgamay ama nooga halgan badnaa ee xaq u leh wax aanan xaq u lahayn? Bal waa aniga i ha yidhaahdo. Waxa la doonayaa Somaliland la wada leeyahay, loo wada siman yahay oo la wada ilaashado
W/Q Ali Guray
Masuuliyiin Ka Tirsan Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia Oo Lagu Soodhaweeyay Somaliland & Ujeedada Socdaalkooda [
Askartii Dagaalkii Labaad Ee Aduunka Ku Dhimatay Ee Ka Soo Jeeda Somaliland Oo Boroordiiq Loogu Sameeyay Dalka France [
Madaxweynaha Somaliland Iyo Weftigii Uu Hoggaaminayey Oo Si Ballaadhan Loogu Soo Dhaweeyey Gobolka Togdheer [ + Sawiro ]
Shacabka Burco Oo Aan U Kala Hadhin Soodhaweynta Madaxweynaha Somaliland iyo Khudbad Uu U Jeediyey Bulshada [ Muuqaal ]
Xukuumadda Somaliland Oo Telefiishanka Astaan Cable Ka Joojisay Tabintii Tooska Ahayd Ee Qalin-jabinta Jaamacada Burco.
Labada Doodood ee ugu Liita marka laga Cabanayo Midawgii Somaliya iyo Dawladdii Siyad Barre!